I-Acquariofilia ne-Acquariology eMessina - The Aquarium
Isifiso somhlaba wePisces ekukhonzeni kwakho
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-7)
I-aquarium a Messina isitolo sabathandi pesci abafuna imikhiqizo engcono kakhulu futhi izesekeli okwabo izindawo zasemanzini. Usebenza ngokukhethekile i-aquariology kanye ne-aquarism futhi esitolo ungathola okunezinhlobonhlobo ezinkulu zezinto ongazenza futhi uzicebise ngezakho aquarium.
I-aquarium - Umbuso wabathandi be-aquarism eMessina
I-Aquarium yisikhungo sokubhekisisa emikhakheni yeUkugcinwa kwezinhlanzi e ukutholwa a Messina. Lapha, abalandeli be pesci futhi of imvelo yasemanzini bazothola konke Aquariums, Izimila nezesekeli zazo izinhlanzi. Phakathi kwezikhungo ezigcwele kakhulu ama-aquaristics, kwakunguweabekho onkulunkulu izitolo zokuqala di ukutholwa a I-Messina. Wazalwa ngonyaka ka-1990 ngiyabonga UValerio Rizzo, uchwepheshe Isazi sezinto eziphilayo zasemanzini obefuna ukuvula a isikhungo esinikezelwe abalandeli be i-aquarium yedolobha. Lapha unikeza wonke umuntu ikhono elikhulu, eluleka izeluleko ezihlakaniphile ukufeza e ukulungiselela okusemandleni akho imvelo yasemanzini. Phakathi kwamandla amaningi, isitolo sezitolo sinolwazi ngokukhethekile i-aquariology yasolwandle eshisayo e tropical dolce, ngokutholakala kwezinhlobo eziningi ezingaziwa, ngaphezu kwakho konke I-Discus, kuya kubani I-Aquarium ubuye waphumelela imincintiswano kazwelonke. Umnikazi, Valerio, ngaphambi kokuqala umsebenzi wezentengiselwano, wavuthwa indlela ecebile kakhulu ngemuva kwakhe, lapho manje enamakhono amaningi: wathola iziqu zeMasters ku Izilwane zasolwandle kuInyuvesi yasePadua kanye ne-degree in Ibhayoloji kanye Ne-Marine Ecology kuInyuvesi yaseMessina, ngamamaki aphelele. Wabe eseya ezifundweni eziningi zokuvuselela futhi namuhla unikeza izifundo ku- i-aquarium kubo bobabili abafundi kanye nabaqeqeshiwe.
I-aquarium yakho kwimalimboleko esetshenziselwa iMessina: ubuhle
Labo abafuna ukwenza ubuhle ekhaya labo noma ibhizinisi ngemibala nokuphila kwe- a aquarium, ngaphandle kokukhathazeka nganoma yini, ingasebenzisa ithuba lokuthi ube ne I-Aquarium kwimalimboleko esetshenzisiwe. Kuyinkonzo enikezwa yisikhungo ukuhlangana nabathandi bayo ngobuhle pesci. Ithimba likaValerio lizonakekela konke ngoba okwakho aquarium kokubili okuhle nokugcinwe kahle isikhathi. Ngomnikelo omncane wanyanga zonke, osuselwa kwiphakheji ekhethiwe, ungakha umlingo imvelo yasemanzini imvelo oyithandayo. Onawo, inhlanganisela ehlukene: ama-aquarium wemvelo noma amnandi ngemihlobiso ne-aerator, ukulungiswa, izitshalo ezinesistimu ye-CO2 nezimo eziningi noma ezicacisiwe ngokuya ngephakheji elikhethiwe. Aquariums con izinhlanzi ezishisayo namanzi abandayo, izindawo ezintsha zamanzi noma zasolwandle nokunye okuningi. Abasebenzi bazokujabulela ukukunikeza ngomsebenzi usizo ngayinye ngasese e izinkampani con ukufakwa e yesondlo okwakho ama-aquarium enziwe ngezifiso. Phakathi kwamanye amakhono esikhungo, ulwazi emkhakheni owesabekayo kufanele futhi luqokonyiswe, ngokutholakala kwemikhiqizo emihle kakhulu ye izifunda e amanzi / amathadi.
Ikheli: I-Via Cesare Battisti, 271
Ucingo: 090 715900
Umakhala ekhukhwini: 340 3811710
Inombolo ye-VAT: 03581640830